Onye nnochite anya Colombia na Austria na-atụba okpu ya na mgbanaka Secretary General UNWTO
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi banyere Austria » Onye nnochite anya Colombia na Austria na-atụba okpu ya na mgbanaka Secretary General UNWTO
Onye nnọchi anya gọọmentị Colombia na Austria, Hon. Jaime Alberto Cabal, bụ onye kachasị ọhụrụ maka ọkwa nke Secretary General nke UNWTO. Nke a bụ ederede n'ihu nke eTN Publisher Juergen Steinmetz.
Steinmetz: entered banyere n'ọsọ ahụ n'abalị. Enwere ihe kpatara iji jigide? Kedu ihe kpaliri mkpebi gị ịbanye na nyocha sara mbara maka UN Secretary General Secretary ọhụrụ?
Cabala: Usoro ịkọwapụta onye ga-abụ onye ọchịchị metụtara naanị ọdịmma onwe ya kamakwa mkpebi mba. N'ihe banyere Colombia, Onye isi ala Republic yana Mịnịsta nke okwu Ofesi chọrọ ịme mkpebi dabere na enwere ike ịhọpụta m yana ọkachamara ọkachamara chọrọ maka ọkwa m. Echere m na ndị buru ụzọ gosi ọkwa ha nwere ike ịnwe uru ọ bụla mana ibute ụzọ ọ bụghị mgbe niile ka ha buru ụzọ jee ozi. Echere m na usoro ihe omume ahụ, amụma ahụ, na profaịlụ onye ndoro-ndoro ochichi na-arụ ọrụ dị mkpa.
Steinmetz: Gini mere ị ji di iche na ndi ozo?
Cabala: O doro anya na ana m asọpụrụ ma na-ahụ ọrụ nke onye ndoro-ndoro ochichi Brazil anya yana onye na-agba ọsọ maka ọkwa nke odeakwụkwọ Ad Hoc na nkwado nke onye ndoro Korea mana n'echiche m, ọdịiche dị na eziokwu ndị a bụ ndị na-aga n'ihu. Na omenala, na UNWTO nke abụọ na-achọ mgbe niile ma ọ bụ a họpụtara ya ka ọ bụrụ Secretary General na atụmatụ anyị na-eme na-elekwasị anya na mmegharị. N'okwu a, anyị chọrọ inwe onye ndoro ndoro Latin America nke na-akpali usoro a anyị na-agwa UNWTO.
Steinmetz: Kedu ihe ị ga - eme iji tufuo ma ọ bụ ndị na - esoghị na UNWTO. Dịka ọmụmaatụ United States ma ọ bụ UK?
Cabala: Otu n’ime atụmatụ ndị bụ isi bụ ịrị elu maka ma ndị otu nọ na ndị otu mgbakwunye; Otu ndị otu anaghị esonye ma ọ bụ mba ndị sobu na nzukọ a mana ha hapụrụ. Ọ bụrụ na anyị enyochaa Mba ndị otu na taa bụ akụkụ nke Organizationtù ahụ, mba 156, anyị na-achọpụta na enwere ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị otu ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ ndị ọzọ nke United Nations Organisations na-arụ ọrụ na Geneva, New York ma ọ bụ Vienna. N'ime thistù a, anyị na-atụ uche gburugburu mba 50 nwere ike ịbụ onye otu UNWTO. Ọ dị oke mkpa na mba dịka UK, US ma ọ bụ mba Nordic na ndị ọzọ nwere ike ịbụ akụkụ nke nzukọ a. Ya mere, n'echiche m, a ga-enwerịrị onyinye ka ukwuu nke uru ga-erite uru karị ma pụta ìhè maka ndị otu ndị otu yana atụmatụ nwere nnukwu mmekọrịta diplọma iji dọta ma ọ bụ kpọọ mba ndị a ka ha sonye na nzukọ a. O doro anya na nke a ga-abụ otu n’ime isi ọrụ m chọrọ iji mejuputa.
Steinmetz: WTTC na UNWTO na-arụ ọrụ dị ka ejima siamese. WTTC na UNWTO na-arụ ọrụ dị ka ejima siamese. Agbanyeghị WTTC na - anọchite naanị ụlọ ọrụ 100. N'ezie PATA na ETOA so rụọ ọrụ n'ime ọrụ UNWTO. Kedụ ka ị ga - esi tinye ndị ọzọ na - eketa oke na ngalaba ndị ọzọ dị oke mkpa?
Cabala: Otu uru dị ukwuu nke UNWTO n'ime usoro United Nations bụ na ọ bụ naanị otu nzukọ gụnyere ngalaba ndị ọzọ dịka otu n'ime ndị otu ya site na otu ndị otu mmekọ. Nzukọ ahụ kwesịrị iji ọnọdụ a mee ihe nke ọma. N'otu ụzọ ahụ thetù ahụ na ndị otu ya si arụkọ ọrụ ọnụ, o kwesịkwara ka ya na ndị ọrụ nzuzo na-arụkọ ọrụ ọnụ na-achọ irite uru site na ike ya, nka na ihe ọmụma ya na mpaghara ndị njem. Na nke a, Achọrọ m ịkwado mkpa dị ukwuu na nsonye nke ndị otu mgbakwunye ọhụrụ na ndị isi na-eduga ndị soro na nzukọ ahụ. Enwere m ekele maka ọrụ na nzube nke WTTC yana mkpa nke ETOA na PATA. Akụkụ nke ọrụ Secretary General bụ ịnọgide na-enwe nguzozi banyere mkpa na ọrụ nke òtù ndị a na ndị otu mgbakwunye ndị ọzọ. Ekwesịrị igosipụta nguzozi ahụike a n'ogo nke ọchịchị gọọmentị. Na-enweghị ike ịchịkwa ọchịchị na ndị otu na-achịkwa dị ka ọgbakọ gọọmentị etiti, Ndị otu mmekọ ga-enyerịrị ụfọdụ ohere isonye na oke mkpebi nke nzukọ ahụ.
Steinmetz: Kedu ka ị ga - esi mee International Coalition of Tourism Partners (ICTP) na ngwakọta. Ekwesịrị m ịjụ gị nke a, ebe ọ bụ m bụ onyeisi oche nke nzukọ a.
Cabala: Mmekọrịta na ICTP dị mkpa dị ka nkwado na ndị ọzọ so n'thetù ahụ. Echere m na ọrụ ICTP dị oke mkpa n'ime amụma m na-eweta dị ka, dịka ọmụmaatụ, iwusi ike nke ọma gbasara ebe njedebe na ndị na-enye ọrụ onwe ha, nke bụ ndị metụtara ya. Ihe ọ bụla metụtara njigide na njem gburugburu ebe obibi na ihe ndị bụ isi maka mmepe ya dịka agụmakwụkwọ ma ọ bụ azụmaahịa dị oke mkpa. Yabụ ahụrụ m ICTP ka ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'oge ọchịchị m ma ọ bụrụ na a họpụtara m odeakwụkwọ General.
Steinmetz: Kedu ihe bụ nzaghachi gị na Ntụpụ ụkwụ, atụmatụ nke onye nnọchi anya gị Dho na-eduzi?
Cabala: Ebumnuche niile nke na-enye aka na ume nke njem njem na-adịgide adịgide, nke nwere mmetụta na agụmakwụkwọ na ọzụzụ na nke na-enye onyinye na obodo ndị nọpụrụ iche na mbelata ịda ogbenye na-anabata mgbe niile. Mmemme a na ntọala a nke UNWTO na-akwado ga-eme ka ọ sie ike n'ọdịnihu ma UNWTO kwesịrị ịtụle njirisi nke mmemme mmemme iji tinye na ya ma emechaa.
Steinmetz: Dị ka onye Colombia, kedu ihe bụ echiche ụwa gị na njem ahụ?
Cabala: Colombia taa na-egosi onwe ya ma ụlọ ọrụ mba ụwa ghọtara ya dịka otu n'ime mba nwere ikike kachasị ukwuu gbasara njem nleta ugbu a na ọdịnihu. Di iche-iche nke ihe eji eme njem nlegharị anya na nka nke Colombia nwere inye dika anyanwu na oke osimiri, njem nlegharị anya nke ọdịbendị na nke akụkọ ihe mere eme, mmemme, obodo, njem na ime njem ime obodo nwere ike ịba uru na njem ụwa. Echiche ohuru nke usoro udo bu ihe enwere ike itinye aka na otutu mba ndi agha. Echere m na nzaghachi a nke Colombia iji gosipụta ihe a na-egosipụta ike Colombia na-enwe na akụ na ụba ya, mmekọrịta ya na mmepe ya n'ihi ọhụụ ọhụrụ nke udo.
Steinmetz: Kedụ ka ị ga-esi mee ka mkpa njem dịwanye mkpa n'ime sistemụ UN, gụnyere nsogbu ịma aka nke mmefu ego, nnọchite ụlọ ọrụ, wdg
Cabala: Njem nlegharị anya ụwa taa na-abawanye ma na-agbanwekwa njem nlegharị anya. Enwere ike ịchọta mgbanwe ndị a n'ime ụdị njem njem ọhụụ, ihe ọhụụ nke ndị njem na teknụzụ ọhụụ. Mba ndị a maara nke ọma mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmekọrịta akụ na ụba na njem yana ya mere ọ dị oke mkpa na UNWTO bụrụ nzukọ na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile na-eweghachi onwe ya, nke na-akọwapụta ihe ọhụrụ ọhụụ nke ma ụwa ma mpaghara na mpaghara njem. Nghọta a, n'ezie, kwesiri itolite n'ime sistemụ nke United Nations na mmụba mmefu ego dị oke mkpa iji nwee ike mepee mmemme na mmemme ọhụrụ. Ya mere, atụpụtara m ka mbelata mmefu nke ime na mmụba nke ihe ntinye ego maka mmemme na mmemme. Ekwesiri ime ka mmefu ego a site na mmụba nke ndị otu na ndị otu mgbakwunye yana site na ịchọọ akụ na mba ụwa nke nwere ike itinye aka na ego dị iche iche na-akwado itinye ego na mmemme ọhụrụ.
Steinmetz: Kedu ihe ị chere banyere nsogbu ịma aka ụwa taa?
Cabala: Iyi ọha egwu na enweghị ntụkwasị obi na-arị elu na-emetụta ọtụtụ mba, mpaghara, na obodo. Nke a, n'ezie, ga-abụrịrị nchegbu kachasị nke UNWTO na ndị ndu ya. Dika anyi siri kwue, UNWTO kwesiri ibu onye ndozi na onye ndumodu nye ndi otu ndi otu na azaghachi mkpa ha ozugbo. Otu ajụjụ UNWTO kwesịrị ịza bụ, dịka ọmụmaatụ, otu esi enyere aka n'oge nsogbu n'oge agile na ngwa ngwa iji gbochie nsonaazụ nke iyi ọha egwu nke ụfọdụ obodo na mpaghara chere. Na nke a bụ ebe mba chọrọ Organizationtù: iji nye mmemme nkwalite yana ozi na nkwukọrịta na-enye azịza ozugbo maka ọnọdụ ha na mkpa ha, iji nye ndị njem nleta ozi ebe ha nwere ike ịga wdg na, dị ka nke a, na-egbochi mmetụta ọjọọ ma ọ bụ oyiyi na-eyi ọha egwu nwere ike inwe na mba ma ọ bụ obodo. O doro anya na nghọta ahụ enweghị mgbanwe ọ bụla ozugbo eziokwu mere, na mgbanwe a nke ihe ga-eme kwesịrị iso UNWTO site na mmekọrịta ya na ndị otu ya. Ekwesịrị inwe otu ndị kwesịrị inye azịza ozigbo maka mba ndị chọrọ nkwado a. Nke ahụ pụtara na n'etiti ihe kacha mkpa nke Organizationtù ahụ kwesịrị ịnwe mmemme nkwado maka mba ndị na-enwe nchebe ma ọ bụ mwakpo ndị na-eyi ọha egwu.
Steinmetz: Gini bu nguzo gi banyere uzo mepere emepe ma obu nke emechiri emechi, visa, visa eletrọniki na ufodu mba ndi ozo n’agbanwe gaa n’oha mechiri emechi.
Cabala: Dika m kwurula na ufodu ajuju ndi gara aga, UNWTO kwesiri ime dika onye nhazi na onye ndumodu na onodu a, o gha agbali igbusi ihe mgbochi di ugbua iji mee ka ndi njem njem bawanye ma meputa ebe ndi njem ohuru. Ọtụtụ oge, ihe mgbochi ndị a dị n'ihi njikwa oke na ọrụ visa nke na-egbochi mmụba a. N'ebe a, UNWTO kwesịrị ime dị ka onye ọlụlụ na nkwado ka mba wee mara banyere mmetụta dị mma nke ibuli akwụkwọ ikike chọrọ maka ndị njem nleta na ụwa. N'otu oge ahụ, ọ ga-arụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ maka ndị njem iji kwado njem na ịkọwa ozi gbasara mgbochi ha nwere ike zute. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, UNWTO ga-arụ ọrụ dị mkpa na mmepe ọhụrụ a na njikọta ụwa ka ndị njem nwee ike ịga njem n’ụzọ dị mfe ma rite uru na teknụzụ ọhụụ iji banye mba ọzọ, nke dịlarị n’ọtụtụ ọdụ ụgbọelu site na visa elektrọnik.
Steinmetz: Gini ka iguzo na nnabata ndi otu pere mpe, tinyere ndi njem njem LGBT?
Cabala: Echere m na UNWTO kwesịrị ịbụ onye nhazi na onye ndụmọdụ nye ndị otu na-ahụ maka amụma gbasara ọha na eze yana ọ kwesịrị iburu n'uche ụdị njem nlegharị anya niile, ngwaahịa dị iche iche nke njem ma ọ bụ mgbanwe ndị na-eme na mba dị iche iche. Na nke a, njem njem LGBT enwetawo nnukwu mkpa site na itinye aka nke ngwaahịa enyere na mmemme mba dị iche iche n'ụwa niile. Echere m na UNWTO kwesịrị inwe usoro ntinye nke njem a, n'otu oge ahụ, na-alụ ọgụ ma na-alụ ọgụ n'ụdị njem ndị ahụ na-emebi ikike ụmụ mmadụ ma na-anwa ime omume ọma n'ihi na ọ bụ ihe gbasara mmegbu mmekọahụ, ịzụ ahịa ụmụ mmadụ na oru ụmụaka, tinyere ndị ọzọ.
Expo 2017 caravan rutere n'isi obodo Great Britain
Linegbọ elu ụgbọ elu merụrụ ahụ site na ịda akpa si n'elu ihe mgbochi